Rayson | intengo kamatilasi ye-duroflex springtek
Eminyakeni edlule, uRayson ubelokhu enikeza amakhasimende imikhiqizo yekhwalithi ephezulu kanye nezinsizakalo ezisebenza kahle zangemva kokuthengisa ngenhloso yokubalethela izinzuzo ezingenamkhawulo. Intengo kamatilasi we-duroflex springtek Namuhla, uRayson uklelisa phezulu njengomhlinzeki oqeqeshiwe nonolwazi embonini. Singaklama, sithuthukise, senze, futhi sidayise uchungechunge oluhlukene lwemikhiqizo ngokwethu sihlanganisa imizamo nokuhlakanipha kwabo bonke abasebenzi bethu. Futhi, sinesibopho sokuhlinzeka ngezinsizakalo ezahlukahlukene zamakhasimende ezifaka ukwesekwa kobuchwepheshe kanye nezinsizakalo ezisheshayo ze-Q&A. Ungathola okwengeziwe mayelana nenani likamatilasi womkhiqizo wethu omusha we-duroflex springtek kanye nenkampani yethu ngokusithinta ngokuqondile.Inokuthamba okuhle. Ihlolwe ngokwalezi zakhiwo ezilandelayo: ukucindezelwa, ukugoba, ukuhwaqazeka kwendawo, nokungqubuzana kwendawo.